iPhoto ka Picasa: Export iPhoto Pictures ka Picasa Web Albums
iPhoto bụ wuru na-foto faili na Mac, nke nwere ihe dị mfe na-eji interface ka ị mbubata, dezie na hazie gị foto na Mac. Otú ọ dị, iPhoto dị anya n'ebe perfect- dịkarịa ala ọ bụ adịghị mfe ịkọrọ gị foto online gị na ezinụlọ gị na ndị enyi. Ekele Google, Picasa Web Albums enye a ogbe uploader maka iPhoto mere na ị pụrụ effortlessly mbupụ iPhoto ka Picasa Web Albums. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ nkuzi na otú mbupụ iPhoto foto Picasa web album.
Ihe ị ga-mkpa mbupụ iPhoto ka Picasa
1. A Mac kọmputa
2. Picasa Web Album akaụntụ, ma ọ bụrụ na ọ dịghị, aha otu maka free
3. Picasa Web Album ekspootu nkwụnye maka iPhoto
Ahụ ugbu a otú mbupụ iPhoto ka Picasa iji Web Album ekspootu
Nzọụkwụ 1: Wụnye Picasa Web Album ekspootu
Download Picasa Web Album Uploader na wụnye ka Ngwa ndepụta. Iji mee otú ahụ, nanị ịdọrọ Picasa Web Album ekspootu akara ngosi na-Ngwa akara ngosi. The installer ngwugwu agụnye ma iPhoto ekspootu nkwụnye na na Mac Uploader. N'okpuru ebe a bụ ihe dị iche n'etiti iPhoto ekspootu na Picasa Uploader.
iPhoto ekspootu: Jiri a iPhoto ikwunye-na bulite gị foto kpọmkwem site iPhoto. Ọ bụrụ na ị nwere iPhoto '08 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ị nwekwara ike bulite gị videos.
Picasa Uploader: Nke a bụ standalone ngwa, nke na-enyere gị bulite niile foto na vidiyo na gị Mac OS ike mbanye (bụghị nanị iPhotos) na Picasa Web Albums.
Unu mara na iPhoto ngwa ga-emi odude ke / Ngwa nchekwa n'oge echichi nke iPhoto ekspootu.
Nzọụkwụ 2: Gbaa iPhoto Ngwa
Mgbe ọma arụnyere Picasa Web Album ekspootu, na-agba iPhoto ngwa. Họrọ iPhoto album ị chọrọ mbupụ Picasa, wee pịa "Share" "Export" "Picasa Web". Ị ga-ahụ na-esonụ panel, na nke ị nwere ike banye na gị Google akaụntụ na-eme ntọala aha, nkọwa, ọnụ ọgụgụ, wdg
Nzọụkwụ 3: Malite exporting iPhoto Foto dị ka Picasa Web Album
Mgbe ihe nile dị njikere, nnọọ pịa "Export" na-amalite na-ebugote iPhoto foto Picasa web album. The bulite oge dịgasị iche site a nkeji ole na ole a ogologo oge dabere na foto nọmba na ị na-exporting si iPhoto ka Picasa. Ozugbo okokụre, ị pụrụ nanị eziga Picasa Web Album URL ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ.
iPhoto ka Picasa Atụmatụ:
1.You nwere ike itinye Keywords n'ime Picasa web album nkọwa ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ na-ahụ gị album mfe.
2.If ị na-adịghị eji iPhoto, ị ka nwere ike iji standalone Web Albums Uploader ngwa bulite gị foto ka Picasa Web Albums.
3.You nwekwara ike iji iPhoto foto eme ka 2D / 3D flash gallery ịkọrọ na onye website na blog.
> Resource> Atụmatụ> iPhoto ka Picasa: Export iPhoto Pictures ka Picasa Albums